Ny Atao Mba Tsy Hiainana Volana Enina Mahatsiravina Ao Ogandà · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Jona 2017 15:07 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Ελληνικά, bahasa Indonesia, English
Tsy manana alàlana ny ho sarontsarotiny izahay, toy ny fiarahamonina hafa.” Afovoan-tanànan'i Kampalà, rehefa hariva. Sary an'i Zahara Abdul, nahazoana alàlana.
Na izao na aoriana kely da tsy maintsy voatery hanao ity adihevitra ity isika. Adihevitra iray izay afaka iraisain'ny maro amin'ireo mponina aty amin'ilay lazaina hoe ny “Global South”.
Raha ny mahazatra, dia tantaran'ny fitetezan'ny olona iray ny ao anatin'ny firenena iray amin'ireo ahitàna ireny “mponina mahafinaritra” sy tontolo amin'ny endrika tsy fahita firy ireny izy ity. Ho ahy, misy fambara iray mampitandrina ahy ho amin'ireny tantara ireny. Mitranga izany rehefa miditra Facebook aho ary mahita lahatsoratra iray nozarain'ny namana misy teny tsotra hoe “Eh!” manaraka azy. Aty Ogandà, teny kely afaka mamehy ny fahatsapana manontolo ananan'ny olona momba ny zavatra iray io. Araka izany, rehefa nahita io “Eh!” io aho ho valin'ny tatara iray vao haingana navoakan'ny gazety Kanadiana iray “The Globe and Mail“, dia tsy maintsy nanapotsitra.
Ilay sombin-tantara, natao lohateny lehibe hoe Ny diako tany Ogandà, toy ny fiainana, dia tsy tonga lafatra tahàka ireo sary, dia anà tovovavy iray izay tonga tao Ogandà mba hiana-draharaha tao amin'ny sampandraharaha iray misahana fampindramambola madinika ary niafara tamin'ny fiainany volana enina nampivarahontsana— izay nanome lesona azy fa tsy feno olona tsara sy mahafinaritra akory izao tontolo izao.
Ndeha ho avelantsika anjorony ilay fomba fijery hoe tsy voatery haneho tanteraka ny tena fiainan'ny olona ireo sary hita ety anaty haino aman-jery sosialy, ity “famoahana manokana” ity, nataon'izany Justina Li izany, “dia nahita” ny ankamaroan'ny lafiny dia (savage) amin'ny fiainana ao Kampalà. Ahitàna fandrobàna ao anatin'ny fitantaràny, mpamily fiara fitaterana nandositra tsy nanome ny famerimbolany ary ireo finamànana sandoka isankarazany. Tsapany ho noho ny volonkodiny no naha-lasibatra azy manokana, ary manoratra izy momba ny fanavakavahana niainany vokatr'izany. Raha marina fa tena mitranga ao Ogandà ireo karazan-javatra rehetra ireo—toy ny any amin'ny toerana hafa eto amin'izao tontolo izao ihany—laroin-dRtoa. Li famendrofendroana ireny tantara fohy ireny, izay toa heverin'ny “The Globe and Mail” fa vilona famokisana tsara ho an'ireo mpamaky azy.
Avy eo ilay mpanoratra nankany Roandà ary manoratra ny horohoro niainany teny an-tsisintany, saingy tsy nanamarika hoe tahotra nateraky ny inona. Tsy omena tsiny ianao raha hieritreritra hoe sisintany manasaraka an'i Ogandà sy Roandà ary ny tahotr'i Rtoa. Li ny ho voatazona any dia toy ny seho an-tsehatra iray nalaina avy amin'ny Etazonian'i Trump na i Eoropa ilay Tsara Aro Indrindra. Tsy hita na aiza na aiza ao anatin'ny fitantaràny ny valin'ny fanontaniana hoe avy aiza no mety ho nahatonga ny tahotra taminy, indrindra fa tsy dia fandre loatra ny fisamborana mpivahiny any amin'ny sisintany.
Tany aloha tany i Binyavanga Wainaina dia nampahatsiahy ny olona hoe rehefa manoratra momba an'i Afrika, tsy tokony ho adino ny milaza ny tontolo mahafinaritra sy ireo ankizy maha-te-ho tia. Ary ny lahatsoratr'i Rtoa. Li dia nahafeno io fepetra io tsara, narahan'ny fanamarihana ny “fitetezana ala mikitroka iray sy ny takariva mahafinaritra rehefa mody masoandro.”
Pikantsary avy amin'ny lahatsoratr'i Justina Li tao amin'ny “Globe and Mail”.
Aty aoriana izy manoratra, anefa, fa “nanahirana azy ny niditra ho isany. Nahatsapa fangirifirina tao an-tratrako aho tao anatin'ilay vondrom-piarahamonina teo an-toerana.” Fanambaràna mahagaga raha izaho no anontaninareo. Sahala amin'ny miteny hoe misy olona iray afaka tonga avy any Kanadà, manitsaka ny làlana mankany Ogandà dia izay, efa “isany” ianao. Tantarainy ny ezaka nataony mba ho “isany”, toy ny fanaovana ny fitafin'ny ao an-toerana sy ny fihogoana volo amin'ny fomba “afrikàna”, saingy gaga izy fa tsy nisy tamin'ireny rehetra ireny nanome azy làlana sahaza hahatsapàny fa “isany” izy—mila foanana ny zavatra tahàka izany, asa mafy sy betsaka, ary fahatakàrana sy marimaritra amin'n'ny tranga maro, fanampin'ny fahatsapanao fa mahazo aina ianao ao anatin'ny tenanao ao.
“Nandeha tany aminà firenena iray vaovao aho, nino fa ny ankamaroan'ny olona eto ambonin'ny tany dia mendrika itokisana, tsara saina. Niala tao aho, resy,” hoy Rtoa. Li manoratra. Miala tsiny aho ny momba izany, fa nitety kilaometatra an'arivony ianao avy any aminà firenena iray hafa mba hiana-draharaha momba ny fampindramambola madinika tany amin'ny toerana izay ny 77 isanjaton'ny vahoaka dia latsaky ny 30 taona ary 22 isanjaton'ny tanora dia tsy manana asa. Raha ny marina, ho an'ireo eo anelanelan'ny 15-24 taona, 83% ny tahan'ny tsy fananana asa. Efa nosaininao ve ny antony nanomezana anao ilay fianaran-draharaha, fa tsy ho an'ny iray amin'ireo tanora Ogandey an'arivony miandrandra ny hahazo izay azo atao tahàka izany?
Ao anatin'ilay lahatsoratra manontolo, tsy mitsahatra tonga tamiko ireo fanontaniana. Nitsahatra tsy nisaina ve i Rtoa. Li hoe mety mba miatrika asa loha mitovy amin'izay manjo azy koa anie ireo olona manodidina azy ireo? Efa mba nanontany ve izy hoe inona avy aminy manokana no nentiny ho an'ilay toerana? Nahoana izy no manatena anay hanolotra azy eo ambony lovia volafotsy ireo izay azo atao sy fahalalàna tadiaviny? Efa nolanjalanjainy ve ny anjara toerana manokana misy azy ao anatin'ilay zavamitranga, toy ny hoe nahoana ny olona iray “voluntourist /mpanira-tena hizahatany” toa azy no nalefa haka traikefa any amin'ny ampahany iray eto amin'izao tontolo izao izay misy hafa maherin'ny 2.000 afaka manao toy izany saingy tsy nanao? Tsy afaka mba nanampy azy ve ny fanaovana fikarohana kely momba ilay toerana? Ary tsy nisy ve anaran'ireo niaraka niasa taminao mba tsaroanao? Angamba ilay ramatoa mpandroso ny sakafo antoandronao nolazainao fa nohaninao samirery? Olona nandray anao tao amin'ny biraon'ny fampindramambola madinika tamin'ny andro voalohany nahatongavanao? Tsy nisy mihitsy ve fihetsika naneho hatsaràm-panahy natao anao ary mba mendrika ho tanisaina nandritry ny fotoana rehetra naha-tao Ogandà anao? Na angamba ankehitriny ianao no lasa iray amin'ireo manampahaizana manokana momba an'i Afrika hitanay miedinedina manodidina anay noho ny “fahaizanao tsara ireo kolontsaina hafa” azonao nandritra ny fotoana fohy nipetrahanao tao amin'ilay “tany”?
Hanampiana anao hamaly ireo fanontaniana ireo, entaniko ianao hanopy maso ilay lahatsoratra “Manohintohina ny fandrosoako ny Fiheverantenanao Ho Fotsy Mpanavotra” nosoratan'i TMS Ruge. Milaza i Ruge fa ny anaram-bosotra nentiny dia ny “Ilay Afrikàna Ava-Pianarana Tezitra”, ary dia tombatombanako ho iray amin'izany koa aho. Miasa ao anatin'io fiheverantena io ianao ary tsy mijery akory ny foko fiavianao. Eny, niaina fotoana nampivarahontsana ianao, saingy heveriko fa mila maka fijery milamina tsara avy ao amin'ilay Fitaka mampietry ny olan'ny olona hafa nosoratan'i Courtney Martin ianao mba hahatakaranao ny antony.
Ny tantaran-dRtoa. Li dia mifarana aminà fanamarihana efa mahazatra. Rehefa avy nivalampatra tamin'ny hazakazaka niarahany tain'ireo Ogandey masiaka, fintininy amin'ity fehezanteny ity ny lahatsorany: “Firenena iray mahafinaritra i Ogandà, misy olona mahafinaritra, manana tantara tsy mampino izay nanome azy fotoana maro fanararaotra.” Kanefa, tsy niresaka velively momba ireo “olona mahafinaritra” ireo mihitsy ilay lahatsoratra, na ireo tantara tsy mampinon-dry zareo. Ankoatry ny maha- “mahafinaritra”—izay fanarontsaronana iraisan'ireo vahiny rehetra miezaka ny tsy hiresaka ny tena zavamisy, tsy manana alàlana ny ho zavatra hafa mihitsy izahay. Tsy manana alàlana ny ho sarontsarotiny, toy ny fiarahamonina hafa. Tsy fomba fijery iray ve izany an'ny olona miainga avy amin'ny hoe mahafinaritra, etsy andaniny, sy mpanao hosoka, etsy ankilany, manohintohina ny fampandrosoana lazainao ho antony nahatongavanao hiasa teto? Antenain'ny rehetra fa hisaintsaina momba ireo i Rtoa Li.
Mediam-bahoaka 04 Desambra 2021
Fanampenam-bava 16 Avrily 2021